Axmed Madoobe oo looga yeeray baarlamaanka Jubbaland si wax looga weydiiyo arrimo xasaasi ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Madoobe oo looga yeeray baarlamaanka Jubbaland si wax looga weydiiyo arrimo xasaasi ah
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) looga yeeray baarlamaanka maamulkaas.
Sheekh Cabdi Maxamed oo ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday inay haatan wadaan qorsheyaal lagula xisaabtamayo hay’addaha amniga iyo madaxweyne Axmed Madoobe.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in Xarakada Al-shabaab ay weli gacanta ku haayaa gobolo ka tirsan goobaha ay Jubbaland maamusho, taas oo uu ku tilmaamay mid dhabar jab weyn ku ah maamulka Axmed Madoobe.
“Sida aad la socotiin inta badan gobolka J/dhexe waxaa weli ku sugan oo maamula Xarakada Al-shabaab, waxaasi ma ahan wax la qaadan karo, waa inuu madaxweyne Axmed Madoobe hor-yimaada baarlamaanka, si wax looga weydiiyo gaabiska amni iyo sababta ay weli Shabaab u maamulaan gobolka J/dhexe” Sidaas waxaa yiri Sheekh Cabdi Maxamed.
Dhinaca kale, Sheekh Cabdi Maxamed ayaa sheegay in baarlamanka Jubbaland uu sidoo kale u yeerayo saraakiisha laamaha ammaanka maamulka Jubbaland, si iyagana wax looga weydiiyo dhibaatooyin laga tirsado ciidamada Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Si kastaba ha ahaatee, go’aankaan kasoo baxay baarlamaanka Jubbaland ayaa kusoo beegmaya xilli inta badan deegaanada gobolka J/dhexe ay ku sugan yihiin Xarakada Al-shabaab, waxayna arrinkaasi sida muuqato hoos u dhigi kartaa awooda iyo sumcada maamulka Jubbaland oo xilli kasta sheega inay Shabaabku ka saari doonaan deegaanada gacantooda ka maqan.